Telefoonka Razer 2 Tilmaamaha iyo Tilmaamaha | Androidsis
Qalabka Razer 2 Waxyaabaha iyo Tilmaamaha
Qolka Ignatius | | Aaladaha Android
Sanadkii la soo dhaafay waqtigan, soosaaraha qalabka ciyaaraha ee Razer ayaa si rasmi ah u soo bandhigay Taleefanka Razer, noloshu aad uguma adkayn magaca, taleefankii ugu horreeyay ee nooc cusub oo mobilada ah oo loogu talagalay oo loogu talagalay kuwa ugu jecel ciyaarta. Shirkadu ma aysan shaacin tirooyinka iibinta ee uu lahaa Razer Phone, laakiin waxay umuuqataa in la filayay.
Aniguna waxaan leeyahay waa la filayay, maxaa yeelay Razer wuxuu soo bandhigay jiilka labaad ee Razer Phone, kaas oo ay ku dareen lambarka 2 si ay uga soocaan kii hore. Sidii la filayay, Razer waxay hagaajisay dhinacyada qaarkood kuwaas oo, inkasta oo ay ahaayeen kuwo aad u fiican jiilkii hore, haddana u nuglaa in la sii wanaajiyo. Waa kuwan dhammaan tilmaamaha iyo astaamaha Razer Phone 2.
Jiilkan labaad wuxuu na siiyaa ficil ahaan naqshad isku mid ah iyo shaashad isku mid ah, oo leh 5,8-inji Sharp IGZO guddi leh 2k qaraar iyo 120HZ heerka cabbirka, oo leh heer dhalaalaya oo ah 650 nits, 50% ka badan kii ka horreeyay. Shaashadu waxay bixisaa Corning Gorilla Class 5. ilaalin, gudaha waxaan ka helaynaa Snapdragon 845 oo ay weheliso 8 GB oo RAM ah.
Dhabarka, waxaan ku aragnaa sida shirkadda booskii kamaradaha ayaa isbedelay, kaamirooyin isku dhafan laba dareemayaal oo 12 mpx mid walba leh xagal ballaadhan iyo muraayad telephoto ah. Labada kamaradoodba waxay leeyihiin dejiye indhaha. Intaa waxaa dheer, xagga dambe waxaan ka helnaa astaanta shirkadda, astaan ​​u beddeli karta midabka sida aan jecel nahay.
1 Tilmaamaha Razer 2 qeexitaannada
2 Qiimaha Razer Phone 2 iyo helitaanka
Tilmaamaha Razer 2 qeexitaannada
Screen Guddi 5.72-inji ah oo ay soo saartay Sharp oo leh teknoolojiyada IGZO IPS. Qiyaasta shaashadda 16: 9
Xallinta 1.440 x 2.560 px iyo 513 dpi
Gacaliye sanpdragon 845
Kaydinta 64 / 128GB la ballaarin karo illaa 512GB.
Cámara trasera Dual 12 mpx oo leh furfurnaan f / 1.8 iyo f / 2.6. Xasiliyaha indhaha iyo laba iftiin LED ah.
Kaamirada hore 8 mpx oo leh fur f / 2.0
Batariga 4.000 mAh oo ku habboon lacag-bixinta degdegga ah iyo wireless-ka
Nidaamka hawlgalka Android 8.1
Xuduudaha kala duwan Bluetooth 5.0 - Labada Wifi ee loo yaqaan 'Wifi band' - isku xirka USB-C
Cabbirada 158.5 mm x 79 mm x 8.5 mm
Qiimaha Razer Phone 2 iyo helitaanka
Jiilka labaad Razer Phone 2 ayaa lagu heli doonaa laba midab: Mirror Blck iyo Satin Black. Websaytka Razer ee Spain weli ma na tuso jiilkan labaad, wax uu Mareykanku sameeyo, halkaas oo aan ka arki karno sida qiimaha nooca 64 GB uu yahay $ 799 (oo lagu daray canshuuraha).
Jiilkan labaad ayaa durbadiiba si toos ah loogu ballansan karaa websaydhka soo -saaraha, laakiin ma noqon doono ilaa Oktoobar 22, taariikhda aad bilaabi doonto inaad dirto boos celinta ugu horreysa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Qalabka Razer 2 Waxyaabaha iyo Tilmaamaha
Sida loo nadiifiyo keydka codsiyada ku jira Android